Amaanka baarlamanka Somalia oo laga fiirsanayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Amniga baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan laga fekarayaa, iyadoo la filayo inuu dhawaan furmo Kalfadhiga 6-aad ee baarrlamaanka oo haatan fasax ku jira.
Guddiga Arrimaha Gudaha Amniga ee baarlaamanaka Soomaaliya, saraakiisha amaanka dalka iyo saraakiil ka socota AMISOM ayaa maanta ka shiray sugidda amaanka Xarrunta Golaha Shacabka oo Alshabaab horay u weerareen.
Hogaanka kormeedka ciidanka booliska Soomaaliya S/guuto Axmed Dayib ayaa sheegay in xogaha la xiriira amaanka baarlamaanka ay la wadaagi doonaan madaxda sare ee aminga iyo kuwa dalka.
Markii shirki dhamaaday ayaa waxaa guddiga iyo saraakiisha amaanka oo wadajirka ah kormeer ku sameeyeen hareeraha dhismaha xarrunta Golaha Shacabka, waxaana halkaas lagu arkay qashin aad u fara badan.
Qashinka yaalla halkaas ayaa ah mid aad uga badan kan lagu arko xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka ah, iyadoo ay wax lala yaabo noqotay in hareeraha baarlamaanku uu noqdo goob qashin weyne ah.
Gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay iney nadiifiyaan hareeraha xarrunta golaha Shacabka Soomaaliya oo qashin fariistay.
Jeesow ayaa dhanka kale sheegay in Alshabaab ay ka faa’iideystaan is-bedelka lagu sameeyo laamaha amniga dowladda Soomaaliya, xilliyadaasna aya weerarro soo qaadaan.
“Al-shabaab waxay ka faa’ideystaan is-bedellada mar walba lagu sameeyo mas’uuliyiinta laamaha amniga dalka, sababtoo ah islama qabsadaan shaqsiga cusub iyo raggii horay u shaqeynayay, waana midda keenta in Al-shabaab ay weerarro ka geystaan Muqdisho,” ayuu yiri xildhibaan Jeesow.
Sidoo kale, xildhibaanka ayaa sheegay in hay’adaha amniga ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya ay xoojin doonaan howlaha lagu sugayo amniga guud ee waddanka, lagana hor-tagayo weerarrada gaadmada ah soo qaadaya.
“Xoogaga Al-shabaab waxay inta badan beegsadan goobaha ay shacabku isugu yimaadaan; balse meelaha dowladda ma weeraraan inta badan, taas macnaheenuna waa inay shacabka beegsadaan,” ayuu xildhibaanku mar kale yiri.
Alshabaab ayaa bilaabay iney weeraro qaraxyo iyo weerar toos ah ku qaadaan xarrumaha dowladda Soomaaliya iyo hoteellada ay ku badan yihiin shaqaalaha dowladda, taasoo haatan keentay in laga fekero amaanka baarlamaanka oo dhawaan furmo doona.
Muqdisho: Xeer Ilaaliyeyaal tabar 6 bil ah loo soo xiray